लकडाउन प्रभाव : निगमको कारोबार दैनिक ६४ करोडले घट्यो « Bagmati Online
लकडाउन प्रभाव : निगमको कारोबार दैनिक ६४ करोडले घट्यो
काठमाडौं, १ जेठ । लकडाउनका कारण नेपाल आयल निगमको कारोबार दैनिक ६४ करोड रुपियाँले घटेको छ । वैशाख तेस्रो हप्तासम्म दैनिक २३ करोड रुपियाँसम्म कारोबार भएको छ । गत वर्ष मासिक ८७ करोड रुपियाँको कारोबार भएको निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाल महिनामा चार अर्ब २८ करोड रुपियाँ राजस्व गुमिरहेको छ ।” पेट्रोलियम पदार्थको माग पछिल्लो एक सातामा ३३ प्रतिशत पुगेको छ । अप्रिल महिना अर्थात् वैशाख १७ सम्म २० प्रतिशत मात्र माग थियो । लकडाउनमा फाट्फुट गाडी चल्न थालेपछि माग बढेको निगमले जनाएको छ ।
बजार सामान्य अवस्थामा नपुग्दासम्म पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्न नसक्ने पौडेलको भनाइ छ । माग कम भए पनि पूर्ण रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गरिएको छ । पौडेलका अनुसार १५ हजार मेट्रिक टन ग्यास मौज्दात रहेको छ ।
लकडाउन खुलेर बजार सुचारु भए पनि १२ दिनलाई पुग्ने ग्यास मौज्दात रहेको उहाँले बताउनुभयो । भण्डारण अहिलेसम्मकै उच्च रहेको पौडेलेले बताउनुभयो । बुलेटहरूमा समेत मौज्दात राखिएको छ र लकडाउन लम्बिए पनि अभाव नहुने उहाँको भनाइ छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।
मूल्य घटेसंगै सानिमा लाइफको शेयर बेच्नेको घुईचो, अहिलेसम्म डेढ लाख कित्ता कारोबार
असोज ६ गतेदेखि ७० लाख कित्ता आईपिओ निष्काशन गर्दै साहस उर्जा, कति दिने आवेदन ?
तेह्रथुम पावरको आईपीओले कति पाउँदै छ त ओपनिङ्ग रेञ्ज ? यस्ताे तथ्य बाहिरियाे
सरकारकाे तर्फबाट अहिले सम्मकै ठूलाे आईपीओहरु ल्याउने घोषणा, कुन-कुनका आईपीओ आउने ?
जीवनविकास जस्तै लगानीकर्तालाई मालामाल बनाउने आईपी आउँदै, वित्तिय अवस्था नै यति राम्राे